Wararka - Sababta mesh qurxinta birta ay caan u tahay.
Birtu waa curiye nashqad leh oo leh dareen naqshadeed oo xooggan. Habka midabku wuxuu dadka siinayaa dareen dhalaalid ah, kaas oo ka dhigaya qaabka guud ee gudaha iyo dibadda geesinimo, sheeko iyo avant-garde.
Waxay ka dhigaysaa saameynta guud inay u muuqato mid la dacaayadeeyay oo ay adagtahay in la xakameeyo, laakiin dhab ahaantii waa sharaf iyo xarrago, dadka siinaya muuqaal wanaagsan iyo dareen sare.
Midabka birta guud ahaan waa mid aad u qurux badan, oo leh dareen xooggan oo naqshadeynta. Doorashada alaabta dhalada iyo biraha waxay ku dari kartaa dareenka naqshadeynta iyo qaabka booska guriga.
Khadadka qurxinta birta ah ee lagu dhejiyay ee derbiga iyo sare waxay leeyihiin muuqaal adag, xariijimo cad iyo lakabyo nadiif ah, kuwaas oo u keena saameyn muuqaal ah oo kala duwan dadka.
Mesh bir ah oo la isku qurxiyo ayaa si weyn loogu isticmaalaa wejiyada, qaybaha, saqafyada la hakiyay, shaadhka qoraxda, balakoonnada iyo waddooyinka, indhoolayaasha rogrogmada, jaranjarooyinka, iwm.
1. Facade: mashruuca qurxinta dibadda waa waxqabadka ugu fiican ee sifooyinka iyo shaqooyinka meshwork qurxinta birta. Codsiga mesh birta ee qurxinta ee dhismaha qurxinta dibadda ayaa kicisay jawaab celin aan dhammaad lahayn waxayna soo jiidatay dareenka dadka.
2. Saqafka: waxaa jira habab diyaaradeed iyo arc laalaadiyay, gaar ahaan qaabaynta: mesh birta qurxinta ee qurxinta muuqaal ahaan waa mid hufan, furan, badbaadinta booska, rakibid fudud oo habboon. Waxay leedahay shaqooyin badan oo codsi ah iyo shaqooyinka qurxinta marka loo eego alaabta kale, waxayna aad ugu badan tahay baahida ilaalinta deegaanka iyo badbaadada dabka. Kuwani waxay buuxinayaan shuruudaha saqafka.
3. Darbiga, dhexda: mesh birta qurxinta sida gidaarka, dhexda. Heerarka kala duwan ee furitaanka iyo qaababka kala duwan ee mesh-qurxinta ayaa keeni doona saameyn kala duwan goobta dhismaha. Marka laga eego dhinacyo kala duwan, gudbinta iftiinka iyo hawlaha ilaalinta ee mesh birta ayaa sidoo kale ka duwan. Hadday noqoto mid qadiimi ah ama mid casri ah, waxay si fiican u fulin kartaa. Meel bannaan kuma qabsanayso, kumana yeeli doonto inaad dareento xannibaadda iyo niyad-jabka booska.
4. Guardrail, ilaalinta buundada: mesh noocan oo kale ah waa mid siman, isku dhafan, laastik ah, saameyn u adkaysta, aan qallafsaneyn, sifooyinkeeda gaarka ah ma qariyaan wasakh, wayna fududahay in la dhaqo. Maaddooyinka cayriin ee tayada sare leh waxay xaqiijinayaan cimrigooda oo dhalaalaya sida cusub, taas oo aan buuxinayn shuruudaha badbaadada, laakiin sidoo kale waxay leedahay sifooyin muuqaal ah.